हेरौ देशको आर्थिक अवस्था ! भान्सा महङ्गो , अर्थतन्त्र सामान्य अप्ठेरोमा - Lagani News
Home Economy हेरौ देशको आर्थिक अवस्था ! भान्सा महङ्गो , अर्थतन्त्र सामान्य अप्ठेरोमा
हेरौ देशको आर्थिक अवस्था ! भान्सा महङ्गो , अर्थतन्त्र सामान्य अप्ठेरोमा
Published: Friday, July 13, 2018 2018-07-13T14:34:00-07:00
Santosh Raj Bajgain July 13, 2018 Economy,
उपभोक्ता मुद्रास्फीति माघ महिनासम्म अघिल्लो वर्षको ३ दशमलव ३ प्रतिशत बाट ५ प्रतिशत पुगेको छ । खाद्य वस्तुहरुमा आएको मूल्य वृद्धिले गर्दा समग्र मुद्रास्फीति वृद्धि हुन पुग्यो । यो ७ महिनाको अवधिमा खाद्य पदार्थमा ४ प्रतिशत मूल्य बढेको देखिन्छ । गत वर्ष खाध्य पदार्थमा मूल्य वृद्धि नभएर ५ प्रतिशतले मुल्य घटेको थियो । यस अवधिमा तरकारीको सबै भन्दा धेरै २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । त्यस्तै गैर खाद्य मुद्रास्फीति ५ दशमलव ८ प्रतिशत रहेको छ जुन अघिल्लो वर्ष ६ दशमलव १ प्रतिशत रहेको थियो ।
बैकिङ्ग क्षेत्रसङ्ग रहेको विदेशी विनियम साँच्चीतले ११ दशमलव ३ महिना वस्तु आयात र ९ दशमलव ८ महिना वस्तु र सेवा आयात गर्न पुग्ने छ ।
सस्थागत निक्षेपकर्ता घटे तर मुद्दती निक्षप वृद्धि :